Sport & Fitness - Ausmalbilder Für kider Kostenlos
Sokajy: Fanatanjahan-tena sy fanatanjahan-tena
Mety amin'ny famerenana fanapahan-kevitra tsara ho an'ny taona vaovao ary mety amin'ny fanidiana - Zumba ao an-trano. Taona vitsivitsy lasa izay taorian'ny nifangaroan'ny dingana fandihizana Amerikana Latina sy ny aerobika niditra tany Alemana.
Zumba dia mamadika ny efitrano fandraisam-bahiny ho lasa dihy fandihizana
Na izany aza, mitohy tsy mitsaha-mitombo ny fisondrotana ary ankehitriny dia tsy dia mahita gym ianao izay tsy manome kilasy Zumba.
Zumba ao an-trano - Sary avy amin'i Pixabay
Saingy tsy ny rehetra no maniry na afaka mankany amin'ny studio. Tsotra ny vahaolana, satria azo alaina ao an-trano ihany koa ny Zumba. Na DVD misy programa efa vita sy choreograpie, CD misy mozika mety na kojakoja samihafa ho an'ny fampiofanana manokana na pejy misy tolotra mivantana mety.
Mazava ho azy ny tombony: mampiofana rehefa maniry ianao ary mihetsika malalaka sy tsy misy teritery. Azo antoka fa tombony io amin'ny voalohany, rehefa tsy mifanakaiky amin'ilay an'ny mpanazatra akory ny fikorontanan'ny hip. "Zumba ao an-trano" Manohiza mamaky
mpanoratra famoahana mpiasaNavoaka tamin'ny 26. Jolay 2021 5. September 2021 Sokajy Fialam-boly & fialamboly, Fanatanjahan-tena sy fanatanjahan-tenaKeywords mihetsika, Fitness, hanao fanatanjahan-tena bebe kokoa, Fanatanjahantena, mandihy, workouts, mandihy ao an-trano, ZumbaLeave a Comment mankany Zumba ao an-trano
Asehon'ny fikarohana fa mijaly noho ny tsy fahampian'ny fanatanjahan-tena ny ankizy sy ny tanora ankehitriny. Fantatry ny ray aman-dreny avy amin'ny zavatra niainany manokana ny maha-zava-dehibe ny trano filalaovana, ny slide ary ny fitaovana filalaovana ivelany ho an'ny fampandrosoana manokana ary koa ho an'ny fahasalamana ara-batana. Ny zava-dehibe kokoa dia rehefa tsy afaka mivoaka amin'ny fomba tianao ianao.
Ny fampihetseham-batana sy ny fiakarana dia zava-dehibe kokoa noho ny hatramin'izay
Ankoatr'izay, ny fikarohana dia mampiseho fa ny tanora sy ny ankizy izay mandany fotoana bebe kokoa amin'ny rivotra madio noho ny conspecifics dia nahavita tsara kokoa tany an-tsekoly noho ireo conspecifics izay niara-niasa tamin'ny fitaovana teknika tao an-tranony.
Ny mandroso sy miakatra dia mampiroborobo ny saina sy ny fahasalamana
Ny vokatry ny rivotra madio eo amin'ny atidohan'ny zaza
Efa fantatry ny Romanina izany: “Mens sana in corpore sano!” Ny vokatry ny hetsika amin'ny rivotra madio dia mampiseho filàna lehibe amin'ny ati-dohan'ilay zaza. Afaka mampiofana sy mamelombelona ny tenany tsara kokoa izy amin'ny alàlan'ny fivezivezena, ny fampahavitrihana ary ny fironana, ary afaka mamokatra sela ati-doha vaovao haingana kokoa koa izy io.
Ny antony lehibe mahatonga izany dia ny fifandraisana rehefa milalao amin'ny ankizy hafa. Rehefa tsy maintsy miady amin'ny rivotra madio ireo tanora dia mitady vahaolana ny ati-doha. Ny sela ao amin'ny ati-doha dia miteraka fitaomana ny rafitra fitadidiana iray manontolo. Zava-dehibe amin'ny fahaizana mifantoka izy ireo. "Fiakarana miakatra manohitra ny tsy fisian'ny hetsika" Manohiza mamaky
mpanoratra famoahana mpiasaNavoaka tamin'ny 11. Jolay 2021 5. September 2021 Sokajy Fanatanjahan-tena sy fanatanjahan-tena, Trano sy tranoKeywords bewegen, mihetsika, ankizy, Telozoro mananika, fiakarana fiakarana, miakatra, mandroso bebe kokoa, hanao fanatanjahan-tena bebe kokoa, toetra, FanatanjahantenaLeave a Comment amin'ny fiakarana zana-kazo manohitra ny tsy fisian'ny fihetsiketsehana
Fanalefahana fanatanjahantena | Sakafo sy fanatanjahan-tena
Mino koa ve ianao fa raha te hihena dia mila manao fanatanjahan-tena fotsiny? Manantena aho fa tsy, na ho diso fanantenana koa ianao.
Ny marina momba ny fomba hampihenana lanja amin'ny fanaovana fanatanjahan-tena
Ny fanaovana fanatanjahan-tena kely fotsiny, toy ny bisikileta na mihazakazaka, dia tsy handoro tavy. Ny fanatanjahan-tena irery dia tsy ampy hampihena ny lanja.
Mampihena lanja amin'ny fanatanjahan-tena
Ka maninona no zava-dehibe loatra ny fihenan-tena sy ny fanatanjahan-tena? Mba hazava, ny fanatanjahan-tena dia manampy anao hihena. Izay mihetsika dia mampiasa angovo. Miorina ny hozatra ary simba ny tavy. Ny tahan'ny metabolika basal koa dia nitombo. Mandoro kaloria betsaka kokoa ny hozatra noho ny tavy na dia miala sasatra aza ianao.
Manampy amin'ny fanalefahana na fisorohana aretina ny fanatanjahan-tena
Ny fanatanjahan-tena dia manampy amin'ny fisorohana ny aretim-po sy diabeta. Mety indrindra ny manambatra fiofanana matanjaka amin'ny fanatanjahan-tena faharetana. Ny fanatanjahan-tena maharitra toy ny bisikileta sy ny jogging dia manamafy ny fo sy ny fivezivezena. Mampitombo ny hozatra ny fanazaran-tena mahery. Ny fanatanjahan-tena dia tsara amin'ny fahasalamanao. Raha te hihena ianao amin'ny fampihetseham-batana dia tsy maintsy manova ny sakafonao koa ianao.
Fanatanjahan-tena sy fihenan'ny lanja, fitambarana mety
Ny fanatanjahan-tena dia mampihena ny kaloria, fa angamba tsy dia araka ny noeritreretinao azy. Ny iray dia mirona haingana hanombatombana ny kaloria nohanina ho avo kokoa noho izy ireo.
Mihena ara-pahasalamana sy maharitra amin'ny fanatanjahan-tena
Miaraka amin'ny fifandanjan'ny angovo ratsy sy ny fihenan'ny tavy dia hihena koa ianao. Tsotra be izany, raha mandoro kaloria betsaka kokoa noho ny sakafo ianao, dia hihena koa. Raha te hihena maharitra ianao dia tsy misy manodidina azy: ovao ny sakafonao ary manaova fanatanjahan-tena! "Fanesorana lanja amin'ny fanatanjahan-tena | Diet sy Fitness " Manohiza mamaky
mpanoratra famoahana mpiasaNavoaka tamin'ny 6. May 2021 5. September 2021 Sokajy Wellness, Fanatanjahan-tena sy fanatanjahan-tenaKeywords mihena, Mampihena lanja amin'ny alàlan'ny fanatanjahan-tena, mampihena lanja maharitra, Fitness, FanatanjahantenaFanamarihana 1 amin'ny fanatanjahan-tena mampihena | Sakafo sy fanatanjahan-tena
Miroborobo ny Fitness, azo antoka izany. Ny "breakthrough" tany Alemana dia mety voamarika tamin'ny "fivezivezena fohy" tamin'ny taona 1970, ary nanomboka tamin'izay dia nitohy ny fandrosoana tamin'ny varotra. Fa inona marina no dikan'io voambolana io?
Fitness - mahita fifandanjana
Amin'ny ankapobeny dia takatra ny dikan'ny ezaka hanaovana zavatra ho an'ny fahasalamana ara-batana sy ara-tsaina. Izany dia atosiky ny faniriana hanatona fomba fiaina voalanjalanja mba hahafahana mahatanty ny adin-tsaina amin'ny fiainana andavanandro tsara kokoa ary hiteraka fifandanjana amin'ny fiainana birao matetika monotonous ara-batana.
Fitness ho an'ny fifandanjana anaty - © Dan Race / Adobe Stock
Voaporofo ara-tsiantifika fa ny mpamily fitaizam-batana dia mampihena ny risika ara-pahasalamany ary mampitombo ny fahafahany mifantoka, voaporofo ara-statistika ny androm-piainana avo kokoa.
Satria afaka misoroka aretina ny fahasalamana ara-batana, ny tolotra mifanaraka amin'izany dia ampiroboroboin'ny orinasam-piantohana fahasalamana ara-dalàna rehetra.
Satria tsy voafaritra mazava ny voambolana dia azo adika amin'ny fomba hafa amin'ny olona samihafa na vondrona liana izany. Ny votoatin'ny dikany dia azo avahana mazava tsara amin'ny fanatanjahantena mifaninana ary koa amin'ny fanatanjahan-tena fialamboly izay mifantoka amin'ny fampitomboana ny fetran'ny enta-mavesatra. Na dia mahita ny tanjona amin'ny tanjona aza ny mpamily fanatanjahan-tena ary tsy miezaka ny manova tsy tapaka ny fetra fampisehoana. Ka ahoana no fomba hahatratrarana ny fahasalamana? "Fitness sy fanatanjahantena" Manohiza mamaky
mpanoratra famoahana mpiasaNavoaka tamin'ny 15. March 2021 5. September 2021 Sokajy Fanatanjahan-tena sy fanatanjahan-tenaKeywords mihetsika, Mety tsara, Fanatanjahantena, WellnessLeave a Comment amin'ny fanatanjahan-tena sy fanatanjahan-tena
Fianakaviana maro no manana bisikileta ary zara raha mampiasa azy. Ny fitsangatsanganana an-bisikileta dia mety hahafinaritra be ary fotoana tsara ho an'ny fianakaviana hanao fanatanjahan-tena kely. Indrindra amin'ny fahavaratra, ny bisikileta dia fotoana mety handaniana ny fotoana malalaka anananao.
Fianakaviana mivoaka amin'ny bisikileta
Raha mankafy ny natiora ny fianakaviana ary mankafy bisikileta, dia azo atao ny fitsidihana kely ahafahan'ny fianakaviana mandany fotoana miaraka. Fitsangatsanganana amin'ny bisikileta dia tsy maintsy kasaina mazava ho azy, satria misy safidy maro amin'ny làlan-kizorana samihafa izay azo raisina ho toy ny làlan'ny fitsangatsanganana.
Mitadiava làlana tsara amin'ny fitsidihana bisikileta
Misy làlana azo atao an-taonina mety tsara ho an'ny fitsidihana bisikileta an'ny fianakaviana. Ambonin'ny zava-drehetra, tokony hijery tsara ny haavon'ny zotram-pitaterana ianao.
Voalohany indrindra, ny fitsangatsanganana bisikileta dia tsy maintsy mahafinaritra ny olon-drehetra. © benik.at / Adobe Stock
Tsy tokony hitaky be loatra ny làlana. Ny olona ao amin'ny fianakaviana dia tokony ho afaka hamita ny lalana amin'ny bisikiletany nefa tsy mila miezaka mafy. Ny lavitra dia azo rakofana ihany koa amin'ny fitsangatsanganana bisikileta. Na izany aza, ny fianakaviana dia tokony hahatsiaro fa ny fitsangatsanganana bisikileta dia misy koa ny dia miverina.
Ny fianakaviana izay tsy mandeha bisikileta matetika dia afaka manandrana ny tànany amin'ny halavirana fohy kokoa aloha. Amin'ny fitsangatsanganana manaraka dia misy foana ny fahafahana misafidy làlana lava kokoa, izay mety manana ambaratonga avo kokoa koa. Fa tsy ny halavan'ny zotra ihany no tokony hojerena. Misy dikany ny mijery manokana raha tsy maintsy mianika havoana ny mpianakavy mandritra ny fitetezam-paritra ataon'izy ireo. "Fitsidihana bisikileta miaraka amin'ny fianakaviana" Manohiza mamaky
mpanoratra famoahana mpiasaNavoaka tamin'ny 14. March 2021 5. September 2021 Sokajy Fialam-boly & fialamboly, Fanatanjahan-tena sy fanatanjahan-tena, Fialan-tsasatra, fitsangatsanganana ary fialan-tsasatraKeywords bisikileta, tsingerin'ny, Fitsidihana bisikileta, tsingerin'nyLeave a Comment mitsangatsangana miaraka amin'ny fianakaviana
pejy 1 pejy 2 Pejy manaraka